शाहरुखकी छोरी सुहानाको सेल्फीले देखेर किन पर्यो दुनिया चकित ! - Ujyaalo TImes - Same Vision, Different Angles
शाहरुखकी छोरी सुहानाको सेल्फीले देखेर किन पर्यो दुनिया चकित !
काठमाडौ । शाहरुख खानकी छोरी सुहाना स्टार किड्सले मात्र हैन उनी उनकै कारणले बेला बेला निक्कै चर्चामा आउने गर्छिन । अहिलेपनि उनी निक्कै चर्चित छिन् । सधैँ लाइमलाइटमा रहने सुहानाको चर्चा हुनुको कारण अहिले भने फरक छ । सुहाना सधैँ केहि न केहि कारण चर्चामा आउँछिन्। फ्यानलाई अब सुहानाको बलिउडमा डेब्युको पर्खाइ छ ।
हालै सुहानाको एक सेल्फीले सोशल मिडियामा आगो लगाएको छ। सुहाना सेल्फीमा साह्रै राम्री देखिएकी छन्। उनले ट्यूब टपसँग घाटीमा सानो लकेट लगाएकी छन्। यो पटक सुहानाको सेल्फी उनको सुन्दरताको कारण नभई कुनै अरु कारण भाइरल भएको हो। सुहानाले यो सेल्फी ऐनाको अगाडी अगाडी बसेर लिएकी छन् जुनमा उनको फोनको पछाडिको कभर पनि देखिएको छ।
सुहानाले आफ्नो ब्याक कभरमा एटीएम कार्ड राखेकी छन्। मान्छेको ध्यान सुहानाको एटीएम कार्डमा गएको छ। त्यसपछि सोशल मीडिया यूजर्सले सुहानाको एटीएम कार्ड माथि चिन्ता जनाएका छन्। सुहाना बलिउडको सबैभन्दा धनी शाहरुख खानको छोरी हुन्। यूजर्सले भनेका छन् ,’उनले आफ्नो फोनको कभरमा राखेकोमा करोडौँ रुपैँया होला। ‘एक यूजरले लेखेका छन् ,’सुहानालाई यो करोडौँ रुपैँया भएको एटीएम कार्ड आफ्नो दैनिक खर्चको लागि हो। उनी कति लक्की छे ।’
उनी आफ्नो एटीएम फोनको पछाडी राख्छिन् र सबैलाई उनको एटीएम कार्डको चिन्ता भईरहेको छ। सुहाना केहि दिन पहिले आफ्नो साथीको बिहेमा देखिएकी थिइन्। बिहे फंक्शनमा सुहानाले हातमा मेहेन्दी लगाएकी थिइन्। सारी लगाएको त्यो फोटो फ्यानले निकै मन पराएका थिए। खबर अनुसार सुहानालाई एक्टिंगमा रुचि छ र उनी छिट्टै बलिउडमा डेब्यु गर्नेछिन्। कतिले त त्यो एटिएम कार्ड हो की के देखाएको भन्दै शंकापनि गरेका छन् ।